I-Kilpipe Cottage - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguEmma
UEmma ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-94% yeendwendwe zakutshanje.
Ibekwe entliziyweni ye-Co. Wicklow, iGadi yaseIreland, kwaye kufutshane nelali yeeDolophu eziTidy e-Aughrim kunye nelali yaseTinahely, le ndlwana ilungele ukubaleka impelaveki okanye phakathi evekini, isiseko sokuhamba okanye iholide esekwe kumsebenzi. okanye indawo efanelekileyo yokuhlala ukuba uzimase umtshato kwindawo yaseBallybeg House, iBrooklodge Hotel okanye iWoodenbridge Hotel.
I-cottage ingaphantsi kweyure ukusuka eDublin.
I-cottage ine-1 yokulala kabini kunye nokongeza ibhedi ye-sofa yokukhupha kwindawo yokuhlala. Inendawo enkulu evulekileyo enekhitshi / yokudlela / indawo yokuhlala. Ikhitshi lineoveni kunye nesitovu, imicrowave, isinki enamanzi ashushu, iketile kunye netoaster kunye nomatshini weNespresso.
Igumbi lokuhlambela elineshawa yombane.
Kubonelelwe ngeti nekofu.
Ibhedi yokuhamba inokubonelelwa ngesaziso sangaphambili.
Umabonwakude kunye neWiFi.
Zininzi izinto ezikufutshane ngokubandakanya iAvoca Woolen Mills-ikhaya lophawu lweAvoca, iAvondale House kunye neForest Park- ikhaya leCharles Stuart Parnell enkulu, iKilmacurragh Gardens, iMount Usher Gardens, iGlendalough kunye nePowerscourt ukubala nje ezimbalwa.
Kwabo bayonwabela umjikelo wegalufa, iWoodenbridge, iMacreddin kunye neCoolattin iiKhosi zeGalufa zonke zifikeleleka lula.
Indawo isisiseko esifanelekileyo sekhefu lokunyuka intaba kunye neenduli ezininzi zokuhamba kunye nokuhamba kwamahlathi kufutshane. Siyimizuzu nje ukusuka kwi-Wicklow Way edumileyo.
Indawo efanelekileyo yokuhlola iMpuma kunye noMzantsi-mpuma. Ngelixa sikwiyure nje ukusuka eDublin siziikhilomitha ezimbalwa ukusuka e-Co. Wexford eqhayisa ngeelwandle ezintle ezinombala oluhlaza.
Ngelixa sifumaneka ngokulula nokuba ngokobuqu okanye ekupheleni kwefowuni, umyalezo okanye i-imeyile ukukunceda ngayo nayiphi na imibuzo onokuba unayo, siya kukunika ngokulinganayo imfihlo ukuba ukonwabele ukuhlala kwakho kwesi silungiselelo sasemaphandleni esizolileyo.
Ngelixa sifumaneka ngokulula nokuba ngokobuqu okanye ekupheleni kwefowuni, umyalezo okanye i-imeyile ukukunceda ngayo nayiphi na imibuzo onokuba unayo, siya kukunika ngokulinganayo…